Mucaaradka oo Famaajo ku eedeeyay xagal-daacin | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya – Golaha Midowga Musharixiinta oo maanta kulan ku yeeshay Hotel Jasiira ayaa sheegay in Farmajo uu doonayo inuu carqaladeeyo heshiis-yadii ay gaareen RW Rooble iyo Mucaaradka, is hor is taagna uu ku sameynayo wada-xaajoodka socda.
“Waxaase nasiib-darro ah in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed C/laahi Farmaajo uu si ula kac ah u xagal-daacinayo wadahadallada u dhexeeya Raisalwasaaraha iyo Midowga” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Mucaaradka.
Golaha iyo RW Rooble ayaa ku ballamay in ay kulan saddexaad wada qaataan, Khamiista soo socota, si loo dhameys tiro wax yaabaha dhiman, hayeeshee Farmaajo ayaa isna isla maalintaas shir wadatashi isu yeeray Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.
Mucaaradka oo arrintaas ka hadlay ayaa yiri “Kaddib markii uu isla-maalintii shirka loo ballansanaa uu ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn u yeeriddiisa, kaasoo uu ku doonayo in uu ku carqaladeeyo wadadallada u dhexeeya Raysalwasaaraha iyo Midowga Murashaxiinta”.
Waxa ay ka digeen waxa ka dhalan kara go’aanka Farmaajo ee ah inuu fashiliyo wada xaajoodka, waxayna ku taliyeen in wada hadalka fursad la siiyo.
Shacabka ayay ugu baaqeen, in ay ka soo qeyb galaaan Mudaharaadka ay iclaamiyeen kaas oo sheegeen inuu Maalinta Sabtiga ah ka dhacayo, taallada Daljirka Dahsoon.
Sii-hayaha xilka RW, Madaxda Maamul goboleedyada iyo Beesha Caalamka ayay ugu baaqeen in ay ka fogaadaan tallaabooyinka guracan ee Farmaajo maleegayo si uu u carqaladeeyo xasilloonida dalka.